FAQs - Shen Zhen AVOE हाई-टेक कं, लिमिटेड।
एलईडी डिस्प्ले कसरी स्थापना गर्ने
सही र द्रुत स्थापनाको लागि, मानिसहरूको सुरक्षाको पूर्ण सम्बन्धमा राम्रोसँग परिभाषित प्रोटोकलहरू पालना गर्ने चरणहरू पालना गर्नुहोस्, अनुहार वा छतमा स्थापनाको मामलामा, तर उत्पादनको सुरक्षाको पनि।
1. अनप्याकिङ र ह्यान्डलिंग
अनप्याकिंग प्रक्रियाको क्रममा कुनै पनि क्षतिबाट बच्न एलईडी क्याबिनेटहरू सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गर्नुपर्छ। यस चरणमा, डिस्प्ले बनाउने मोड्युलहरूलाई तान्नु वा हिट नगर्नको लागि सावधानी अपनाउनु पर्छ। विशेष ध्यान प्लेटको कुना र छेउमा अवस्थित LEDs मा दिइनुपर्छ, ती क्षेत्रहरूमा कुनै पनि प्रहारबाट बच्न।
2. LED डिस्प्लेको स्थिति र माउन्टिङ
स्क्रिन माउन्ट गर्न सुरु गर्न, मोड्युलहरू एकअर्काको छेउमा राखिएको हुनुपर्छ। क्याबिनेटहरूमा, माथिल्लो र पार्श्व भागहरूमा, एन्करिङ मेकानिजमहरू छन् जसले तेर्सो र ठाडो रूपमा जडानहरूको लागि अनुमति दिन्छ।
डाटा तारिङ प्रक्रियाले क्याबिनेटहरू बीचको zigzag क्रमलाई पालना गर्नुपर्छ, सधैं तल बायाँमा अवस्थित एउटाबाट सुरु हुन्छ। मोड्युलहरू त्यसपछि डाटा इन र डाटा आउट पोर्टमा जडान हुन्छन्। हाम्रो प्रणाली सफ्टवेयरको लागि धन्यवाद, हामी साधारण परीक्षणहरूको साथ सम्पूर्ण स्क्रिनको सही तारहरू प्रमाणित गर्न सक्छौं। अन्तमा रङ क्यालिब्रेसन र चमक सेटिङ पछ्याउँछ।
4. विद्युत आपूर्ति
स्क्रिनमा एकीकृत पेशेवर कनेक्टरहरूलाई धन्यवाद पूरा गर्न पावर तारिङ सजिलो छ।